Asa fanaovan-gazety : mampiranty ireo angon-tsariny i Dany Be | NewsMada
Asa fanaovan-gazety : mampiranty ireo angon-tsariny i Dany Be
Par Taratra sur 07/09/2016
Miavaka amin’ny fahita matetika ny fampirantiana saripika, etsy amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy Analakely, nanomboka omaly hatramin’ny 10 septambra izao.
Azo lazaina ho sarobidy tokoa ireo sary aranty, satria mirakitra tantara sady ahitana taratra ny mahakanto ny saripika. Mitohy ny fankalazana ny faha-150 taona nisian’ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’ireo hetsika ho fanamarihana izany ity fampirantiana, karakarain’ny fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona, ity. Raha ny marina, an-dRakotoseheno Daniel, fantatry ny maro amin’ny hoe Dany Be, mpanao gazety fanta-daza avokoa ireo sary miisa 60 aranty etsy amin’ny CGM.
Araka ny fanazavany, misy efa tamin’ny taona 1960 ireto sary ireto. Tsara ny manamarika fa miloko mainty sy fotsy avokoa izy ireo, izany hoe, tsy nisy fanamboarana na fikitikitihana, toy ny fanaon’ny mpaka sary maro ankehitriny.
Ankoatra ny mahakanto sy ny lafiny tantara, azo tarafina amin’ireo sary ihany koa ny tontolo niainan’ireo mpanao gazety, 40 na 50 taona lasa izay. Tafiditra ao anatin’izany ny fitaovana nampiasaina sy ny mety olana sy fahasarotana tamin’ny fanatontosana ny asa. “Manana tombony ianareo mpanao gazety amin’izao fotoana izao, satria efa raitra sy arifomba ny fitaovana”, hoy i Dany Be, nanamafy izany.
Na mbola fotoam-pialan-tsasatra aza izao, inoana fa ho maro ny tanora, indrindra ny mpianatra ho liana amin’ity fampirantiana ity.